အိုရှန်းနီးယား - ဝီကီပီးဒီးယား
'အိုရှန်းနီးယား (အင်္ဂလိပ်: Oceania; UK: /ˌoʊʃiˈɑːniə, ˌoʊsi-/ သို့မဟုတ် US: /ˌoʊʃiːˈæniə/), Oceanica ဟုလည်း ခေါ်ဆို) ဆိုသည်မှာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာများအတွင်းတွင် အသီးသီးပြန့်ကျဲနေသော ကျွန်းကြီးကျွန်းငယ်များ အသီးသီးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစုအဝေးကြီးကို ဆိုလိုသည်။ ထိုထက် တိကျစွာဆိုရလျှင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတွင် ရှိသော အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ဩစတြေးလျ နိုင်ငံများမှ တောင်အမေရိကတိုက်ကြားရှိ ကျွန်းစုနိုင်ငံများဟု သတ်မှတ်နိုင်သည်
၈,၅၂၅,၉၈၉ km2 (၃,၂၉၁,၉၀၃ sq mi)
၃၆,၆၅၉,၀၀၀ (၂၀၁၀၊ ဆဋ္ဌမမြောက်)
၄.၁၉/km2 (၁၀.၉/sq mi)
UTC+14 (ကီရီဘတ်စ်နိုင်ငံ) မှ UTC-11 (အမေရိကန်ဆမိုးအား နှင့် နျူးအေး) (အနောက်မှ အရှေ့)
ဟိုနိုလူလူမြို့၊ ဟာဝိုင်ယီ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Port Moresby, ပါပူအာနယူးဂီနီ
Gold Coast၊ ဩစတြေးလျ
(၁ ဇူလိုင် ၂၀၀၂ မှန်းချက်)
ဩစတြေးလျ ၇,၆၈၆,၈၅၀ ၂၁,၀၅၀,၀၀၀ ၂.၇ ကင်ဘာရာမြို့
ခရစ္စမတ်ကျွန်း (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၁၃၅ ၁,၄၉၃ ၃.၅ Flying Fish Cove
ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်းများ (ဩစတြေးလျ) ၁၄ ၆၃၂ ၄၅.၁ West Island
နယူးဇီလန် ၂၆၈,၆၈၀ ၄,၁၀၈,၀၃၇ ၁၄.၅ ဝယ်လင်တန်မြို့
နော်ဖော (ဩစတြေးလျနိုင်ငံ) ၃၅ ၁,၈၆၆ ၅၃.၃ Kingston
ဖီဂျီ ၁၈,၂၇၀ ၈၅၆,၃၄၆ ၄၆.၉ Suva
အင်ဒိုနီးရှား (Oceanian အပိုင်းဘဲ) ၄၉၉,၈၅၂ ၄,၂၁၁,၅၃၂ ၈.၄ ဂျကာတာမြို့
နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား (ပြင်သစ်) ၁၉,၀၆၀ ၂၀၇,၈၅၈ ၁၀.၉ Nouméa
ပါပူအာ နယူးဂီနီ ၄၆၂,၈၄၀ ၅,၁၇၂,၀၃၃ ၁၁.၂ ပို့တ်မော့စဘီမြို့
ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ၂၈,၄၅၀ ၄၉၄,၇၈၆ ၁၇.၄ Honiara
ဗနွားတူနိုင်ငံ ၁၂,၂၀၀ ၁၉၆,၁၇၈ ၁၆.၁ Port Vila
မိုက်ခရိုနီးရှားနိုင်ငံ ၇၀၂ ၁၃၅,၈၆၉ ၁၉၃.၅ Palikir
ဂူအမ် (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ၅၄၉ ၁၆၀,၇၉၆ ၂၉၂.၉ Hagåtña
ကီရီဘတ်စ် ၈၁၁ ၉၆,၃၃၅ ၁၁၈.၈ South Tarawa
မာရှယ်အိုင်းလန်း ၁၈၁ ၇၃,၆၃၀ ၄၀၆.၈ Majuro
နအူရူးနိုင်ငံ ၂၁ ၁၂,၃၂၉ ၅၈၇.၁ Yaren
မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစု (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ၄၇၇ ၇၇,၃၁၁ ၁၆၂.၁ Saipan
ပလောင်း ၄၅၈ ၁၉,၄၀၉ ၄၂.၄ Melekeok
အမေရိကန်ဆမိုးအား (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) ၁၉၉ ၆၈,၆၈၈ ၃၄၅.၂ Pago Pago, Fagatogo
ကွတ်ကျွန်းစု (နယူးဇီလန်) ၂၄၀ ၂၀,၈၁၁ ၈၆.၇ Avarua
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား (ပြင်သစ်) ၄,၁၆၇ ၂၅၇,၈၄၇ ၆၁.၉ Papeete
နျူးအေး (နယူးဇီလန်နိုင်ငံ) ၂၆၀ ၂,၁၃၄ ၈.၂ Alofi
ပစ်ကိန်ကျွန်းစု (ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံ) ၅ ၄၇ ၁၀ Adamstown
ဆမိုးအား ၂,၉၄၄ ၁၇၈,၆၃၁ ၆၀.၇ Apia
တိုကလောင် (နယူးဇီလန်နိုင်ငံ) ၁၀ ၁,၄၃၁ ၁၄၃.၁ —
တုံဂါနိုင်ငံ ၇၄၈ ၁၀၆,၁၃၇ ၁၄၁.၉ Nukuʻalofa
တူဗားလူ ၂၆ ၁၁,၁၄၆ ၄၂၈.၇ Funafuti
ဝေါလစ်နှင့်ဖူကျူးနား (ပြင်သစ်) ၂၇၄ ၁၅,၅၈၅ ၅၆.၉ Mata-Utu
စုစုပေါင်း ၉,၀၀၈,၄၅၈ ၃၅,၈၃၄,၆၇၀ ၄.၀
စုစုပေါင်း (ဩစတြေးလျမထည့်တွက်လျင်) ၁,၃၂၁,၆၀၈ ၁၄,၇၈၄,၆၇၀ ၁၁.၂
↑ Oceania။ 'Dictionary.com'။ Random House, Inc. (2012)။ 2014-03-08 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Oceanica" definition။ The Free Dictionary။2April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Christmas Island and Cocos (Keeling) Islands are Australian external territories in the Indian Ocean southwest of Indonesia.
↑ Excludes parts of Indonesia, island territories in Southeastern Asia (UN region) frequently reckoned in this region.
↑ On ၇ October ၂၀၀၆, government officials moved their offices in the former capital of Koror to Melekeok, located ၂၀ km northeast of Koror on Babelthuap Island.
↑ Excludes the US state of Hawaii, which is distant from the North American landmass in the Pacific Ocean, and Easter Island,aterritory of Chile in South America.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အိုရှန်းနီးယား&oldid=698157" မှ ရယူရန်
၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။